Renivohitra : harenina ny lalana 32 km | NewsMada
Renivohitra : harenina ny lalana 32 km
Vita ihany ! Araka ny notaterina teto, nanomboka ny alatsinainy alina teo ny fanarenana ny lalana mirefy 400 m etsy Behoririka, manoloana ny tranombarotra Avance center sy ny farihy. Manao ny asa ny orinasa Sogea Satom, ary ho vita anio alarobia, rehefa nampijaly ny mampiasa fiara nandritra ny taona maro.
Nahafahan’ny minisiteran’ny Asa vaventy nanao ny fanarenan-dalana eto an-dRenivohitra ny fankatoavan’ny filankevitry ny minisitra. Nambaran’ny minisitra Ratsiraka Roland fa mitotaly 32 km ny lalana harenina eto Antananarivo.
Hatao mandritra ny telo volana ny asa ka mizara andiany efatra. Aorian’ity etsy Behoririka ity, handeha indray ny etsy Soarano hatreny Ambohimanarina. Eo koa ny eny amin’ny “route circulaire” sy ny lalana tena be mpampiasa. Mahatratra 10 miliara Ar ny tetibola ampiasaina avy amin’ny hetra Tahiry hikojakojana ny lalana (Fer).
Tokony haharitra dimy taona
Nambaran’ny teknisianina avy ao amin’ny orinasa Sogea Satom, fa manara-penitra ny asa ataon’izy ireo ka tokony hateza mandritra ny dimy taona farafahakeliny. Miankina amin’ny habetsahan’ny mpampiasa ny lalana sy ny fikojakojana azy koa anefa izany.
Mikasika ny eny Andohan’i Mandroseza, sarotra ny fanarenana satria misy ny tany mihotsaka, ka tsy maintsy atao am-pahamalinana.
Notsorin’ny minisitra Ratsiraka Roland, fa fandraisana andraikitra izao ataon’ny minisitera iadidiany sy ny fitondrana foibe izao, na dia anjaran’ny kaominina CUA aza ny mikojakoja sy manarina ny lalana eto an-dRenivohitra.